Xildhibaanada BF oo diyaarinaya mooshinkii ugu horeeyay - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaanada BF oo diyaarinaya mooshinkii ugu horeeyay
Xildhibaanada BF oo diyaarinaya mooshinkii ugu horeeyay
Muqdishp (Caasimada Online) – Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa diyaarinaya mooshinkii ugu horeeyay tan iyo markii dhawaan ay doorteen madaxweynaha Soomaaliya.
Mooshinkaani ayaa ah mid ka dhan ah dhismaha dowladda Imaaraatka carabta dooneyso inay ku dhisato saldhig meletari oo ku yaala magaalada Berbera.
Qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in mooshinkaasi uu yahay mid gabo gabo ah dhawaanna loo gudbin doono guddoonka baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiye Jawaari ayaa kulankii sabtida ee xildhibaanada baarlamaanka u diiday in xildhibaanada ay ka hadlaan arinta Berbera, maadama uusan kamid aheyn ajandayaasha baarlamaanka.
Wuxuuna ka hor jeediyay xildhibaanada in haddii ay doonayaan arintaasi inay diyaariyaan mooshin arintaasi la xiriirta oo lagu soo daro ajandayaasha shirarka baarlamaanka.
Golayaasha Guurtida iyo wakiilada Somaliland ayaa bishii lasoo dhaafay si xoog ah ku ansixiyay heshiiska imaaraatka iyo maamulka Somaliland, waxaana meel gabo gabo ah maraya qorshaha dhismaha saldhigaasi.